လူနေ တိုကျအိမျတှေ ဆောကျတဲ့အခါ ပွောပွောနကွေတဲ့ RC ဆိုတာ……. – Nyi Ma Lay
လူနေ တိုကျအိမျတှေ ဆောကျတဲ့အခါ ပွောပွောနကွေတဲ့ RC ဆိုတာ…….
By Nyi Ma LayPosted on October 6, 2021
𝗥𝗖 ရဲ့ အရှညျ အဓိပ်ပါယျဟာ 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 ဖွဈပွီး မွနျမာလို သံကူအားဖွညျ့ကှနျကရဈလို့ သုံးနှုနျးတာ တှဖေူ့းပါတယျ။ ကှနျကရဈထဲမှာ သံမဏိခြောငျးတှေ ထညျ့သှငျး သှနျးလောငျးတဲ့ ကှနျကရဈ အမြိုးအစားလို့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ။
ခရဈတျောမပျေါမီ နှဈပေါငျး မြားစှာကတညျးက ရောမလူမြိုးတှဟော Vesuvius မီးတောငျကရတဲ့ မီးတောငျပွာနဲ့ ဖောကျထုံးနဲ့ရောပွီး Pozzolana လို့ချေါတဲ့ အင်ျဂတတေဈမြိုးကို အဆောကျ အဦးတှေေ ဆာကျလုပျရာမှာ အသုံးပွုခဲ့တ ယျလို့ အထောကျအထားတှအေရ တှရှေိ့ရပါတယျ။
အင်ျဂတကေို အဆောကျ အဦးဆောကျ လုပျရာမှာ သမိုငျးတဈလြှောကျ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ နှဈကာလကွာ လာတာနဲ့အမြှ အင်ျဂတေ သှနျးလုပျတဲ့န ညျးစနဈတှေ အဆငျ့ဆငျ့ တိုးတ ကျပွောငျးလဲလာခဲ့ပမေယျ့ အားနညျးခကျြ တဈခုကေ တာ့ရှိနပေါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့ အင်ျဂတဟော ဖိနှိပျခံနိုငျအား (Compression Strength) အလှနျကောငျးပမေယျ့ ဆှဲဆနျ့ခံနိုငျအား (Tensile Strength) အလှနျနညျးပါးခွငျး ပါပဲ။ ဆိုလိုတာကတော့ အင်ျဂတတေုံးတဈ တုံးကို အားနဲ့ဖိနှိပျခမြယျဆိုရငျ အတိုငျးအတာ တဈခုအထိ မကှဲမကွနေိုငျပမေယျ့ သားရပေငျလို ဆှဲဆနျ့လိုကျရငျတော့ အလှယျတကွူေ ကမှပကျြစီး သှားတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီပွဿနာကိုဖွေ ရှငျးဖို့အတှကျ အင်ျဂေ တလောငျးတဲ့အခြိနျမှာ စတီးခြောငျးလို Tensile Strength ကောငျးတဲ့အရာတဈခုကို ထညျ့သှငျးတညျဆောကျလာကွပါတယျ။ ဘာအားသာ ခကျြရသလဲဆိုေ တာ့ ကှနျကရဈရဲ့ အားသာခကျြဖွဈတဲ့ Compression Strength နဲ့ စတီးရဲ့ အားသာခကျြဖွဈတဲ့ Tensile Strength နှဈခုစလုံးကို ပေါငျးစညျးပေး လိုကျသလိုဖွဈသှား ပါတော့တယျ။
𝗥𝗖 ကို ပထမဦးဆုံးစတ ငျတညျဆော ကျခဲ့တာကတော့ Jean-Louis Lambot ပဲဖွဈပါတယျ။ Lambot ဟာ သူ့ရဲ့ ကှနျကရဈလှငေ ယျလေးတှေ တညျဆောကျရာမှာ ခံနိုငျရညျအား ပိုမိုကောငျးမှနျစဖေို့ သံေ ခြာငျးတှေ၊ သံဇကာတှေ ထညျ့သှငျးတညျဆော ကျခဲ့တယျလို့ အထောကျအ ထားတှအေရတှရှေိ့ရပါတယျ။ သူကတော့ သမိုငျးမှာ 𝗥𝗖 ကို ပထမဆုံး တညျဆောကျ အသုံးပွုခဲ့သူလို့ အမညျတှငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့နာမညျက သိပျမတှငျကယျြခဲ့ပါဘူး။
𝗥𝗖 ကို အဆောကျအဦး တညျဆောကျရာမှာ ပထမဦးဆုံး စတငျအသုံွး ပုခဲ့သူကတော့ ပွငျသဈလူမြိုး François Coignet ပါပဲ။ အထောကျအထားတှနေဲ့ စှယျစုံကမျြးတှမှော Coignet ရဲ့နာမညျ ကသာ ပိုပွီးအရာတှ ငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူလညျး 𝗥𝗖 ရဲ့ အသုံးဝငျပုံ၊ အားသာခကျြတှကေို သိလို့ဆိုတာထကျ ပါရီမွို့ Charles Michles အရပျ ခွံအမှတျ ၇၂ မှာ သူဆောကျနတေဲ့ လေးထပျတိုကျ ကလေး ပုံမပကျြသှားေ အာငျဆိုပွီးတော့ ကှနျကရဈထဲ စတီးခြောငျးတှေ ထညျ့သှငျးတညျဆောကျရာက 𝗥𝗖 သမိုငျးအစပွုခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
၁၈၅၄ ခုနှဈမှာ အင်ျဂလိပျဆောကျလု ပျရေးသမား William B. Wilkinson က ကှနျကရဈရဲ့ Compression Strength အားသာခကျြနဲ့ Steel ရဲ့ Tensile Strength အားသာခကျြနှ ဈခု ကိုပေါငျးစညျးဖို့ရညျရှယျခကျြနဲ့ 𝗥𝗖 ကို ပထမဆုံးစတငျအသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။
Coignet က ၁၈၅၃ မှာ ဆောကျလုပျခဲ့တာဖွဈလို့ Wilkinson ထကျ တဈနှဈစောပါတယျ။ အဲဒီကနစေပွီးတော့ Steel ထုတျလုပျတဲ့နညျးပညာတှေ အဆငျ့မွငျ့လာသလို 𝗥𝗖 တှလေညျး ပိုမိုအဆငျ့မွငျ့လာကွတာ ဒီနအေ့ထိပါပဲ။ Credit original uploader
𝗥𝗖 ရဲ့ အရှည် အဓိပ္ပါယ်ဟာ 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 ဖြစ်ပြီး မြန်မာလို သံကူအားဖြည့်ကွန်ကရစ်လို့ သုံးနှုန်းတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကွန်ကရစ်ထဲမှာ သံမဏိချောင်းတွေ ထည့်သွင်း သွန်းလောင်းတဲ့ ကွန်ကရစ် အမျိုးအစားလို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက ရောမလူမျိုးတွေဟာ Vesuvius မီးတောင်ကရတဲ့ မီးတောင်ပြာနဲ့ ဖောက်ထုံးနဲ့ရောပြီး Pozzolana လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂတေတစ်မျိုးကို အဆောက် အဦးတွေေ ဆာက်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တ ယ်လို့ အထောက်အထားတွေအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အင်္ဂတေကို အဆောက် အဦးဆောက် လုပ်ရာမှာ သမိုင်းတစ်လျှောက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ကာလကြာ လာတာနဲ့အမျှ အင်္ဂတေ သွန်းလုပ်တဲ့န ည်းစနစ်တွေ အဆင့်ဆင့် တိုးတ က်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပေမယ့် အားနည်းချက် တစ်ခုကေ တာ့ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အင်္ဂတေဟာ ဖိနှိပ်ခံနိုင်အား (Compression Strength) အလွန်ကောင်းပေမယ့် ဆွဲဆန့်ခံနိုင်အား (Tensile Strength) အလွန်နည်းပါးခြင်း ပါပဲ။ ဆိုလိုတာကတော့ အင်္ဂတေတုံးတစ် တုံးကို အားနဲ့ဖိနှိပ်ချမယ်ဆိုရင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ မကွဲမကြေနိုင်ပေမယ့် သားရေပင်လို ဆွဲဆန့်လိုက်ရင်တော့ အလွယ်တကြူေ ကမွပျက်စီး သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာကိုဖြေ ရှင်းဖို့အတွက် အင်္ဂေ တလောင်းတဲ့အချိန်မှာ စတီးချောင်းလို Tensile Strength ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်လာကြပါတယ်။ ဘာအားသာ ချက်ရသလဲဆိုေ တာ့ ကွန်ကရစ်ရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ Compression Strength နဲ့ စတီးရဲ့ အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ Tensile Strength နှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်းစည်းပေး လိုက်သလိုဖြစ်သွား ပါတော့တယ်။
𝗥𝗖 ကို ပထမဦးဆုံးစတ င်တည်ဆော က်ခဲ့တာကတော့ Jean-Louis Lambot ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lambot ဟာ သူ့ရဲ့ ကွန်ကရစ်လှေင ယ်လေးတွေ တည်ဆောက်ရာမှာ ခံနိုင်ရည်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ သံေ ချာင်းတွေ၊ သံဇကာတွေ ထည့်သွင်းတည်ဆော က်ခဲ့တယ်လို့ အထောက်အ ထားတွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။ သူကတော့ သမိုင်းမှာ 𝗥𝗖 ကို ပထမဆုံး တည်ဆောက် အသုံးပြုခဲ့သူလို့ အမည်တွင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့နာမည်က သိပ်မတွင်ကျယ်ခဲ့ပါဘူး။
𝗥𝗖 ကို အဆောက်အဦး တည်ဆောက်ရာမှာ ပထမဦးဆုံး စတင်အသုံြး ပုခဲ့သူကတော့ ပြင်သစ်လူမျိုး François Coignet ပါပဲ။ အထောက်အထားတွေနဲ့ စွယ်စုံကျမ်းတွေမှာ Coignet ရဲ့နာမည် ကသာ ပိုပြီးအရာတွ င်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း 𝗥𝗖 ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ၊ အားသာချက်တွေကို သိလို့ဆိုတာထက် ပါရီမြို့ Charles Michles အရပ် ခြံအမှတ် ၇၂ မှာ သူဆောက်နေတဲ့ လေးထပ်တိုက် ကလေး ပုံမပျက်သွားေ အာင်ဆိုပြီးတော့ ကွန်ကရစ်ထဲ စတီးချောင်းတွေ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရာက 𝗥𝗖 သမိုင်းအစပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၅၄ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဆောက်လု ပ်ရေးသမား William B. Wilkinson က ကွန်ကရစ်ရဲ့ Compression Strength အားသာချက်နဲ့ Steel ရဲ့ Tensile Strength အားသာချက်နှ စ်ခု ကိုပေါင်းစည်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ 𝗥𝗖 ကို ပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
Coignet က ၁၈၅၃ မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Wilkinson ထက် တစ်နှစ်စောပါတယ်။ အဲဒီကနေစပြီးတော့ Steel ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာတွေ အဆင့်မြင့်လာသလို 𝗥𝗖 တွေလည်း ပိုမိုအဆင့်မြင့်လာကြတာ ဒီနေ့အထိပါပဲ။ Credit original uploader
Previous post Acc မကွာခဏ စဈပါ
Next post လူတှအေမြားကွီးရှိတဲ့ ကွားထဲကမှ ခွငျတှကေ သငျ့ကိုပဲ ဘာလို့ရှေးပီးကိုကျနတောလဲ……..သိခငျြလား